Wepamusoro 5 Ewiricheya Chokwadi Chawaisaziva Nezve! | Karman® Mawiricheya
Wepamusoro 5 Ewiricheya Chokwadi Chawaisaziva Nezve!
Posted on December 9, 2020 December 16, 2020 by csr 1688
Ndeapi ari pamusoro mashanu Chokwadi chewiricheya izvo zviri zvakakosha? Kune vanhu vari remara kana kudenhwa mumuviri, wiricheya yemagetsi inogona kuratidza kuve inobatsira kana vachida kudzorerazve imwe yavo kufamba.
Mukuwedzera kumusoro 5 wiricheya chokwadi ndicho chedu chepamusoro gumi Karman mawiricheya.
Uyezve, a wiricheya inopa ari remara munhu ane mukana wekunakidzwa upenyu neshamwari dzavo nemhuri vachiita zvimwe zvisingaite mabasa.
Wiricheya yemagetsi vashandisi vanogona kunakidzwa nekuenda kumapaki kana kutora chikamu mumabasa enguva dzose sekutenga zvekutengesa. Sezvo mawiricheya emagetsi anoita kwete inoda kushanda nesimba kwakawanda, zviri nyore kushandisa uye kupa vanhu nerusununguko rukuru.
Kuenda simba nesarudzo yekupeta zvirokwazvo iri yepamusoro shanu runyorwa kufamba!
Pazasi tataura izvo zvishanu zvinonyanya kufadza wiricheya yemagetsi chokwadi chaunofanira kuziva nezvacho:
1. Zvakanaka, ngatitangei Chokwadi chewiricheya nekudzidza nezve iye akatanga iyo wiricheya, uyo anozivikanwa nezita rekuti George Klein. Iyi ndeimwe yepamusoro 5 wiricheya chokwadi tichaenda pamusoro.
Munguva yeHondo Yenyika II, George Klein akaona varwi vakati wandei pamwe nevanhuwo zvavo vakakuvara zvakaipisisa.
Zvakare, mushure mekuona vese vanhu vakakuvara ipapo saizvozvi, gare gare, zvakamukurudzira kuti ashande mukugadzira yepasirese yepasi rose wiricheya.
2. Dzazvino mawiricheya emagetsi vane akati wandei zvinobatsira. Izvo zvinogona zvakare kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi. Semuenzaniso, mamwe ma mavhiripu vane tilting zvigaro zvinogona kubatsira mushandisi mukumira.
Izvo zvimwe emagetsi mawiricheya mamodheru zvakagadzirwa ne kugona kugara pasi.
Zvisinei, mamwe acho anototsigira kukwidziridzwa kwechigaro pamwe nemakumbo.
3. Kutaura nezve Chokwadi chewiricheya, ngatirege kukanganwa kuti chinyorwa chehurefu hwakareba chakafukidzwa ne wheelchair yemagetsi mumaawa makumi maviri nemana chete zvakawanikwa naJackie Weeden.
Zvakare, akateedzera maawa gumi nematatu nepo zvakamutorera maminetsi makumi mashanu kuvhara 13 mamaira.
Uyezve, imwe rekodhi yenyika yekukurumidza wheelchair marathon mujaho. Yakagadzwa naJosh Cassidy. Iye akatasva rake wiricheya kutenderera iyo Marathon yeBoston muawa imwe, maminetsi gumi nemasere, nemasekondi makumi maviri neshanu.
4. Ane makore 47 ekuberekwa remara Mugari weUAE, Haidar Taleb, akagadzira a wiricheya-inofambiswa nezuva kwekufamba mamaira mazana maviri. Rwendo rwaTaleb rwakatanga muna Mbudzi 200, 22. Akafamba achiyambuka ese emirates. Akagadzira iro rezuva-simba mavhiripu mukubatana ne renewable kambani yesimba iri mu Abu Dhabi inonzi Masdar. Wiricheya inogona kushanda pakumhanya kwazvo ingangoita 9 kusvika 12 mph. Izvi zvinokurumidza kwazvo. Kazhinji 5 mph inokurudzirwa.
Yakagadzirwa ine yakakwana bhatiri kugona kuramba ichishanda kweanosvika maawa matanhatu. Kunyangwe mushure mekuvira kwezuva shure kwemakore. Mazhinji mawiricheya ikozvino enda 15-20 mamaira. Isu tave kutenderedza kusvika kumusoro kwedu mashanu wiricheya chokwadi.
Chekupedzisira, seyedu yekupedzisira uye yekupedzisira yepamusoro 5 wiricheya chokwadi
5. Heino nhamba yechishanu.
Another wiricheya inonakidza Chokwadi chine hukama neiyo wiricheya yepasi rose mitambo.
Yakanga isiri iyo kusvikira kuOlympic yeRoma mu1960, uko yekutanga mutambo wemitambo remara vatambi vakarongeka.
Pakutanga, vatambi vaishandisa zvekare zvakajairwa mavhiripu.
Moreoever, iyo mijaho yakange yakarongedzwa chete kuti ifukidze chinhambwe chinosvika mazana maviri emamita. Yakanga iri mugore ra200 muBoston Marathon yaive yekutanga-zvachose wheelchair marathon mukwikwidzi akamhanya
Wepamusoro 10 Karman Healthcare Mawiricheya e2020 - Akanyanya Ongororo Gwara
Isu tinoshuvira izvo kuwedzera topo yedu 10 Karman wiricheya irumbidzo kune yedu yepamusoro 5 wiricheya chokwadi.
Kune vanhu vakaomeswa mumuviri, wiricheya yemagetsi chishandiso chinoshamisa che kusimbisa pachako kufamba.
Mukuwedzera, ndizvo zvakakosha kupa mawiricheya akakodzera kwete chete kuwedzera kufamba asiwo kutanga maitiro ekumisikidza nyika yedzidzo, yemagariro, uye yehupenyu hupenyu.
Uyezve, zvese nekutenda kuna mavhiripu, remara vanhu vanogona ikozvino, pamwe nevamwe vanhu, kunakidzwa nekuenda kumapaki uye kutora chikamu mune zvakajairika zviitiko senge zvekutengesa kunotenga uye nezvimwe zvakawanda.
Pamwe nekupa kufamba rubatsiro kumushandisi, yakakodzera wiricheya yemagetsi zvinobatsira hutano hwepanyama uye hwepfungwa.
Izvo zvakare zvinobatsira ari unhu yehupenyu hwevashandisi nekuderedza zvakajairika nyaya dzakadai semablister, kumanikidza maronda, kufambira mberi kwechero hurema.
Uyezve, ichave ichivandudza kufema uye masisitimu ekugaya emushandisi.
Mukuwedzera, a wiricheya yemagetsi inopa remara nemukana wekukoshesa kufamba. Zvinobatsira chaizvo. Icho chikonzero ndechekuti simba rinogona kutsiviwa. Isu tese tinoda rubatsiro diki dzimwe nguva. Kune vasina simba, rubatsiro urwu runoshandura kune hutano hwakanaka. Kunyangwe kutora chikamu mune zviitiko uye exercises neshamwari dzavo uye nemhuri.
Uyezve, wiricheya yemagetsi vashandisi vava kugona kuita mabasa akambofungidzirwa hazvigoneke nekuda kwavo kuremara.
Kunyangwe zviri nyore sekufamba nzendo refu kana kukwira kufambidzana nzira. Unoda kugara wakagwinya. Unoda kuva kunze. Izvi zvinhu zvine basa.
Kugadzirwa kwe mawiricheya emagetsi ane akaita hupenyu zviri nyore kwazvo ku remara vanhu, uye izvo zviri pamusoro zvinoratidza izvozvi. Isuwo tinogona kupinda kumira simba.
ZveMotokari Maoko Ekudzora - Vatyairi Vane Urema
Ko vanhu vari mumawiricheya vanogona kukwikwidza mumarathoni?
Boston Marathon Mujaho weMafambiro Akaremara
Kuwanazve Kuzvimiririra neMobile Aids
Dzorerazve Kuzvimiririra Kwako Nechigaro Chekugeza
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged kuremara, isina kurema wheelchair, kufamba, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu.
Global Kuremara Chirevo uye Wiricheya Kufambisa
Yakakura Kunze Uye Kwekunze Zviitiko zveVashandisi veWiricheya!